304 shaashad bir ah oo tolsan oo qurxin mesh silig ah
Shabakadda silig cidhiidhi ah waa shabag labajibbaaran oo laga sameeyay maaddooyin kala duwan iyo tilmaamo kala duwan oo fiilooyinka birta ah oo ay wataan mishiin farmaajo ah ka dibna nooc cusub oo mishiinka tolmada ah. Waxay leedahay adeegsiyaal kala duwan.
Tilmaamaha mesh silig cidhiidhi ah
Lambarka siliga Dhexroorka siliga Mesh Hole dia miisaanka
Mashxado silig bir ah oo cufan
silig bir madow, silig galvanized, silig birta ahama, silig cad.
Mesh mesh bir ah oo cufan
koodhka duubista, go'doominta mawjada laba jiho, foorarsi, foorarsi, quful fidsan, foorarsi labajibaaran, foorarsi, hir gariir midaysan.
Astaamaha mesh silig cidhiidhi ah
qaab-dhismeed adag, isku-kalsoonaan sare, iwm. Iska caabbinta saamaynta ay sabab u tahay qaab-dhismeedkeeda tolka ah.
Ujeedada mesh silig cidhiidhi ah
inta badan loo isticmaalo macdanta, dhuxusha, dhismaha, beeralayda, beerta iyo warshadaha kale.
Inta badan waxaa lagu isticmaalaa goobaha caamka ah sida hoolalka bandhigga, hoteellada, garoomada diyaaradaha, saldhigyada tareenada iyo dhismayaal sifo leh. Waxa kale oo loo isticmaali karaa wejiga, xijaabka, saqafka, sunshade, balakoonka iyo marinka, qurxinta dusha tiirarka, rullaluistemadka, marinka jaranjarada, qurxinta gudaha ee hoteelada, xafiisyada, hoolalka bandhiga, dukaamada, iwm. Sifooyinkeeda kuma xaddidna cabbirka meel bannaan, si sahlan loo rakibo, qalabaysan iftiin ayaa soo saari doona saameyn aad u qarsoodi ah, oo leh dareen xooggan oo casri ah.
Hore: Siligga birta kaarboonka ah ee tayada hooseeya ee tayada sare leh ee isku xirka silsiladda
Xiga: Ilaalinta jiirada webiga mesh laba geesood ah
Daboolka qaboojiyaha aluminiumka gaarka ah
Soo bandhigida daboolka qaboojiyaha aluminiumka Ka dooro noocyo kala duwan oo ah organic, garaafyada iyo qaababka joomatari, ama xafiiskayaga naqshadeynta ha sameeyo qaab gaar ah oo ku habboon muuqaalkaaga aad rabto. Alunotec waxa ay bixisaa adeegyo dhammays tiran oo dhamaadka-ilaa-dhamaadka ah. Daboolka qaboojiyaha aluminiumku waa qalab ilaalin dibadeed oo qaboojiyaha. Waxay leedahay sifooyinka xoogga sare, rakibida habboon, muuqaalka quruxda badan, kuleylka wanaagsan ee kuleylka, adkeysiga xooggan iyo wixii la mid ah. ...
Jidka dhexe ee go'doominta ee dawladda hoose
Alaabooyinka ugu muhiimsan: ilaalinta birta galvanized ee cadceedda, ilaalada birta galvanized, ilaalinta wadooyinka dawlada hoose, waardiyaha wadooyinka lugeynaya, mootada iyo kuwa aan mooto lahayn, ilaalada xarunta wadada, ilaalada wadooyinka oo boodhadh leh, ilaalinta webiga, sariirta sariirta cawska cawska ah Ilaalada go'doominta wadada ee dawlada hoose waxay leedahay gaar ah , noocyo badan, iyo dhererka iyo midabka waxaa loo dooran karaa sabab la'aan. Ilaalada degmada waa tareen ilaalin ah oo ku yaala bartamaha wadada weyn, kaas oo ujeedadiisu tahay in lagu...
Shabakadda qurxinta ee siliga qaybsanaanta birta
Horudhaca mesh qurxinta birta qaybinta Iyada oo horumarka farsamada ee beerta qurxinta dhismaha iyo soo bixitaanka joogtada ah ee qalabka dhismaha, dhismaha shabakada qurxinta birta, sida wakiil ka mid ah qalabka cusub ee ilaalinta deegaanka ee warshadaha, ayaa soo jiitay dareenka ballaaran ee warshadaha. Alaabooyinka ayaa si tartiib tartiib ah u qaangaaray, caan baxay oo lagu dabaqay mashaariicda qurxinta dhismaha ee caanka ah, oo si tartiib tartiib ah ugu dhaqaaqaan dhanka caalamiga ah